Ogaden News Agency (ONA) – Daawo Safiirka Ethiopia ee Wadanka USA oo Woyne woyne ku barooranaya
Daawo Safiirka Ethiopia ee Wadanka USA oo Woyne woyne ku barooranaya
Shir ka burburay Gumeysiga Ethiopia maalinimadi Axada 09/06/2013 Calgery USA,
Waxaa magaalada Calgary ee wadanka Mareykanka ku mudaharaaday boqolaaldad ah oo kasoo horjeeda gumeysiga Ethiopia. Dadkan ayaa mudaharaadkooda ku hor qabtay hotelka Dwontown hotel oo uu ku jiray Qunsuulka Ethiopia.
Poliska wadanka Mareykanka oo aad u tiro badan ayaa banaanbaxan si dag dag ah ku yimid kadib markii iskahor imaadyo ka dhex qarxeen dadkii mudaharadayay iyo dadkii shirka lagusoo casuumay. Dadka mudaharadayay ayaa markiiba ishortubay irida hoteelka iyaga oo diiday inay cidina gasho cidina kasoo baxdo Hotelka.
Sida Filimkaas kore aad ku aragtaan waxaad arkeysaan Qunsulkii Ethiopia oo baroor iska qabsanaya madaxana heysta isaha oo leh woyne woyne, kadib markii ay dadkii gudaha hotelki ku daateen islamarkaasna jaranjaradi loo fuulayay qolkii shirka ay xoog kula wareegeen. Waxaad sidoo kale aad arkeysaan Managerkii hotelka oo la hadlaya qunsuulka una sheegaya in shirku sii socon karin.
Poliska ayaa iyagy ku yimid in kabadan 20 gawaadhi oo kuwa loogu tala galay in mudaharadyada noocan oo kale ah lagaga hortago. Balse Poliska ayaa ka gaabsaday inay dadkii mudaharadayay ay ka kaxeeyaan shirka.
Warbaahinta wadanka USA oo wax ka weydiisay sababta ay Polisku dadka uga kaxeyn waayeen meesha ayay kusoo gaabsadeen hadalkoodi. Annaga waxaa lanoogu yeedhay in meesha dagaal ka dhicin. Poliska ayaa sheegay in Cidina waxba ku noqon Qofna aysan xidhin.
Shirkan ayay dowlada wadanka Ethiopia rabtay inay lacago ugu aruursato Damka waxuuna ku fashilmay ceeb iyo fadeexad soo gaadhay gumeysiga Ethiopia. shirkaasna halkaas ayuu ku bur buray.
Maahan markii u horeysay ee gumeysiga Ethiopia laga burburiyo shirar noocan oo kale ah. Jaaliyadaha Somalida Ogaadeniya ayaa shirarkan oo kale burburiyay waxaana u danbeyay shirkii Norwey.